नेपालमा संक्रमितको अवस्था कस्तो छ ? – Health Post Nepal
नेपालमा संक्रमितको अवस्था कस्तो छ ?
२०७७ वैशाख ६ गते १७:०५
कोरोना भाइरसको आशंकामा हालसम्म पिसीआरबाट ८ हजार १७ को नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । र्‍यापिड टेष्सबाट १९ हजार ४ सय ५४ जनाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
र्‍यापिड टेष्टबाट सबै जिल्लामा नमुना परीक्षण सुरु भएको छ । शनिवार ४ हजार ५सय ३६ जना क्वारेन्टाइनमा र १ सय १७ आइसोलेसनमा रहेको छन् । प्रवक्ता डा. देवकोटाको अनुसार २ सय ५४ जना रेड जानेनमा रहेका छन् ।
टेकु अस्पतालमा २ संक्रमित मध्ये १९ वर्षीया युवतीमा परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएपछि डिस्चार्ज गरिएको डा. देवकोटाले बताए । विभिन्न जिल्लामा गरिएको र्‍यापिड टेष्ट पोजेटिभ देखिएका पीसीआरबाट हुने परीक्षण जारी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
देशभर हालसम्म कोरोना सक्रमतिको संख्या ३० पुगेको छ ।
दुई जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने २८ जना विभिन्न अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका छन् । टेकु अस्पतालमा १, पाटन अस्पतालमा २, बागलुङमा २, धनगडीमा ५, विरगञ्जमा ४, भरतपुरमा २ र विराटनगरमा १२ जना रहेका छन् । मन्त्रालयले जनाए अनुसार २८ जना सक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको छ ।